Cusboonaysiinta cusub ee Anguilla ee ku saabsan borotokoolka gelitaanka safarka laga bilaabo Noofambar 1
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Cusboonaysiinta cusub ee Anguilla ee ku saabsan borotokoolka gelitaanka safarka laga bilaabo Noofambar 1
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • News
Guddoomiyaha Gobolka iyo Mudane. Premier of Anguilla wuxuu qeexay shuruudaha borotokoolka gelitaanka ee la cusboonaysiiyay ee booqdayaasha kaasoo dhaqan gali doona Isniinta, Noofambar 1, 2021.
Shuruudaha imaanshaha ka hor:
Dhammaan booqdayaasha 18 sano iyo ka weyn waa in si buuxda loo tallaalaa si loogu oggolaado gelitaanka Anguilla; haweenka uurka leh waa laga dhaafay shuruudan. Qeexitaanka "si buuxda loo tallaalay" waa saddex (3) toddobaad ama kow iyo labaatan (21) maalmood kadib qiyaasta labaad ee tallaalka. Tallaalada isku dhafan waa la aqbalaa laakiin waa inay ahaadaan noocyo kala duwan oo Pfizer, AstraZeneca iyo Moderna.
Dadka safarka ah waa in ay ka codsadaan Ogolaanshaha Gelitaanka ee ivisitanguilla.com; Codsiga gelitaanka waxa ku jiri doona kharashka imtixaanka imaanshaha ee US$50 qofkiiba.
• Baaritaan taban oo loo yaqaan 'Covid-19' ayaa weli loo baahan doonaa, laakiin baaritaanka hadda waa in la qaadaa ugu yaraan 2-5 maalmood ka hor imaanshaha.
Noocyada imtixaannada la aqbali karo waa:
Tijaabooyinka falcelinta silsiladda Polymerase Reverse Transcription (RT-PCR).
o Tijaabooyinka Kor-u-qaadista Acid Nucleic Acid (NAA).
o RNA ama molecular test.
o Baadhitaannada Antigen-ka oo lagu dhammeeyo suufka sanka.
Shaybaarka ka shaqeeya baaritaanka imaanshaha ka hor waa in la aqoonsan yahay. Tijaabooyinka is-maamulka iyo kuwa ka-horjeeda lama aqbali doono.
Dhammaan martida waa la tijaabin doonaa marka ay yimaadaan waxaana looga baahan doonaa inay joogaan hoteelkooda, Villa shatiga ama guryo kale oo kiro ah inta imtixaanka laga shaqeynayo (badanaa 24 saacadood gudahood).
Haddii natiijadu tahay mid xun, ma jiri doonto shuruud karantiil ah. Martidu waxay xor u yihiin inay iskood u sahamiyaan jasiiradda.
Martida joogta jasiiradda in ka badan 8 maalmood waxa laga yaabaa in la tijaabiyo maalinta 4 ee booqashadooda, kharash dheeraad ah ma laha.
Codsiyada lama aqbali doono ka dib 12:00 PM EST maalinta ka horeysa maalinta imaatinka.
Martida waxaa laga codsanayaa inay u hoggaansamaan oo ay ixtiraamaan xeerarka COVID-19 ee dhismooyinka jasiiradda, oo ay ku jiraan xidhashada wejiga ee meelaha dadweynaha ee gudaha ah; had iyo jeer ilaalinta kala fogaanshaha bulshada ugu yaraan 3 fiit inta u dhaxaysa dadka ku jira goobaha gudaha; iyo ilaalinta nadaafadda saxda ah iyadoo si joogta ah loo dhaqo gacmaha ama isticmaalka gacmo nadiifiyaha.
Maamulka Caafimaadka ee Anguilla waxay sugeen tallaalka Pfizer si ay u fidiyaan barnaamijka tallaalka jasiiradda ilaa:
• Dhammaan carruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17 jir.
• Kuwa aan weli la tallaalin.
• Tallaabooyinka xoojisa kuwa horay looga tallaalay Astra Zeneca (qiyaastii 60% dadka waaweyn ee deegaanka).